Ungayithenga kanjani ama-backlink esemgangathweni futhi ubone iwebhusayithi yami phezulu ekusesheni kwe-Google?
Kuza ngaphandle kokuthi ukwakha iphrofayili ye-backlink ikhwalithi yindlela efanele yokushayela iwebhusayithi yakho phezulu kwe-SERP ye-Google. Kungani? Ngenxa yokuthi ama-backlink ephilayo asevele eyaziwa ukuthi abe phakathi kwezici eziqine kakhulu (isignali yesithathu esibaluleke kakhulu, okucacile) okucatshangwa yi-Google uma kunikezwa isiteleka esikhwameni ohlwini lwemiphumela yokusesha. Ngaphezu kwalokho, labo abavele bazi ukuthi bangayithola kanjani imikhiqizo yangemuva ye-backlink akufanele nanini baqine ukutshala isikhathi kanye nomzamo ekutholeni ama-backlink organic nge-PR ephakeme noma ngokuzakhela ngesandla. Lokho bekuyohlale kukhokhela, ngiyaqiniseka.
Okungaphezulu - izikhungo zangemuva ezifundisayo noma ezisezingeni eliphezulu zikahulumeni (i. e. , okuvela kumchashazi we-EDU kanye nemithombo ye-GOV emithonjeni ye-intanethi enethemba elikhulu kanye negunya) linamandla nakakhulu. Bangakwazi ukuthuthukisa ngokuphawulekayo ukubonakala kwe-intanethi cishe noma yikuphi amawebhusayithi ebhizinisi noma amabhulogi - enikeza amagama abo amagama ngokucaciswa okuqinile ekusesheni, nokunikeza ukuqwashisa okubanzi komphakathi ngesikhathi esifanayo. Futhi lapha kufika iqiniso elilodwa elibandayo, okungukuthi kulabo bafana abasalokhu bebuza ukuthi bangathenga kanjani ama-backlink esemgangathweni kumawebhusayithi wezemfundo noma kahulumeni. Ake sibhekane nakho - ukuthola izixhumanisi ezikhokhelwayo akunakwenzeka nje lapho. Ngisho ukuthi ngezinye izikhathi awudingi ukwazi ukuthi ungathenga kanjani izinqolobane zekhwalithi ezingemuva nhlobo - ngoba nje zingathola kuphela. Kanjani? Ngokuvamile, bazodinga umsebenzi wakho onzima ekubhaliseni ucezu oluwusizo lokuqukethwe, ekugcineni uthole leyo backlink eyifunayo neyigugu ngokubuyela.
Ukubuyela emuva, sizame ukukuthola - ukuthi ungathengela kanjani izixhumanisi ezinempilo ngokuphepha. Into yokuthi akukho ziqondiso zomhlaba wonke noma amathiphu anemiphumela eqinisekisiwe. Ngisho ukuthi awukwazi ukuba nesiteleka esicacile nesiqondile sokuthola ama-backlink ngokuphepha nangokufanele (i. e. , izixhumanisi ezingakwazi ukusebenza empeleni yakho, ngesikhathi esifanayo ngaphandle kokuphakamisa ifulegi elibomvu ne-Google). Eqinisweni, ukufaka izixhumanisi ezikhokhelwayo akuyona into kuphela kodwa uhlelo lwe-shady lwe-Gray-Hat noma ngisho ne-Black-Hat SEO. Futhi-ke, iningi lama-backlink wathengwa ngokuvamile kulindeleke ukuthi libukeke sengathi liyimvelo kubo bonke - kokubili ukusesha bukhoma, nokukhwabanisa ibhu.
Noma kunjalo, ngisakholwa ukuthi kungcono ukugwema ukukhohlisa izinjini zokusesha - ngaphandle uma ufuna ukuthola isijeziso esisheshayo ngokushesha. Noma kunjalo, uma usenabo isibindi ngokwanele ukuze uzame ukuthola amanye ama-backlink akhokhelwayo kuzo zonke izindleko, cabanga ngamaphuzu alandelayo e-bullet, okungenani ungabanjwa noma uhlaselwe kanyekanye:
Ungalokothi uthathe noma iyiphi inthanethi imithombo noma labo abathinteka ngokucacile ukuthi bakhokhelwe emuva kwe-backlinks.
Qinisekisa ukuthi abalingani bakho abangaba namandla banamandla okuphoqa izizinda kanye nokuqukethwe kwekhasi lewebhu elihambisana niche yakho, noma i-topi yebhizinisi.
Yiba nesheke kabili kusiphathimandla sesizinda, isikhulu sekhasi, kanye nezikhasi ze-PageRank ukuze uthole umthamo omkhulu nokuthembela kusuka kuzilaleli ezibanzi.
Ngokufanelekile, kufanele wenze ukusebenzisana nabakhulegi bebanye ku-niche yakho. Njengoba unikeze ukuthi ulungele ukuzinikeza ucezu lokuqukethwe okubalulekile, lokho kuzothatha isikhathi esithile. Uma kungenjalo, bazokhokha imali enengqondo. Konke mayelana nebhizinisi, kwesokudla?
Amasondo e-backlink (ukushintshana), i-PBNs (ngaphandle kwalokho, ama-blog amanethiwekhi angasese), kanye nezinsizakalo ezishibhile ezihlinzeka ngamasekhondi we-backlink aphansi kakhulu, noma ukuthi ama-imeyili acasulayo aphonsela ngokushelela ukufakwa kwawo emithonjeni ephezulu ye-PR kuphela - gwema "abahlinzeki" abanjalo kuzo zonke izindleko. Kungenxa yokuthi sebevele bebize isamba senhlawulo (noma ngisho nokuvinjelwa okungunaphakade ekusesheni). Ngokushesha noma kamuva, i-Google iza kubo bonke - ababili "abahlinzeki" abangenalwazi, kanye "namakhasimende" abo abampofu kanye Source .